Okusanda eziningi inkulumo mayelana ne-polio, ikakhulukazi ngemva kokugqashuka acute izifo ezithathelwanayo ibhalisiwe kwelinye izifunda Ukraine. Lesi sifo esibi ngempela. ngokwempilo yangenyama okuphezulu kanye iphesenti elikhulu yokukhubazeka unika uvendle. Kuyini futhi idluliselwa kanjani isifo, zama ukuthola ndawonye manje.
Uvendle has elinye igama - ukukhubazeka umgogodla kwezingane. Engozini izingane ezineminyaka engu-ngemva kwezinyanga eziyisithupha kuya eminyakeni eyisithupha. Uma emzimbeni wengane kwaba poliovirus, wahlakulela uvendle. Njengoba Wadlulela yilesi sifo esesabekayo? Indlela elula futhi ezivamile ngendlela - by amaconsi sisemoyeni. Zahlakazeka zahlala ezihlukahlukene izinambuzane ngokuphepha, ngaphezu, iyaqhubeka kumuntu ngokudla ezingahlanjiwe noma izandla ezingcolile.
Poliovirus kuyinto olukhuni kakhulu: imvelo, uyakwazi ukuhlala izinyanga eziyisithupha, ngaphandle kokwesaba frost futhi ilanga. Umthombo ukutheleleka ungumuntu, ikakhulukazi uma ethole ukususwa kanye namafomu alula kakhulu lesi sifo. Kusukela ku-yangaphandle imvelo amagciwane nihlangene Inobulongwe isikhwehlela acinene. nesineke Iningi esithathelwanayo iba izinsuku ezintathu ngaphambi imfiva, futhi esikhathini esingaphansi kwesonto nesenzakalo yayo. Isibhadalala igciwane ngokuvamile ebonwe ihlobo noma ekwindla, ikakhulukazi inkathi eyingozi - kusuka August kuya Okthoba.
Lesifo ingena emzimbeni ngalo ingaphakathi ngomlomo. Yena luhlala emathunjini, lapho kuchuma ngempumelelo futhi liphindaphindeke. Igciwane kuthinta motor ezinzwa, kanye grey emgodleni we nomgogodla. Ngenxa yalokho, lonke iqembu imisipha yoma. Njengoba amangqamuzana ezinzwa e ife, ingane agule nokukhubazeka ezinzima.
Sesikubonile ukuthi uvendle ngobulili. Izimpawu zesifo ziyabonakala abantu ngemva kokuba imuncwe pathogen noma yamthola kusukela imvelo esebenzisa izandla. Ekuqaleni kubonakala sengathi ngokuvamile eba acute izinkinga zokuphefumula: isiguli sine-yisisu ekhaleni, ukukhwehlela, imfiva, futhi kwezinye izimo - sohudo. Abazali ngephutha akazange ukuya kudokotela, ngoba ezinsukwini ezimbalwa zonke izimpawu anyamalale, futhi ingane obukeka engumqemane. Noma kunjalo, ngemva kwezinsuku ezimbili naye evuka futhi awukwazi ukuthola ezinyaweni zawo - umntwana okhula ukukhubazeka flaccid yezingalo nemilenze aphansi. Ngalo kanye nabantwana abancane bangasondela thwebula ipheshana zokuphefumula, bona uzizwa ubophekile futhi kungenzeka yinhliziyo afe.
Physicians for sebuningini emashumini uvendle ukuhlolisisa lokho kuyini nokuthi igciwane ngobulili. Futhi baye bathola ukuthi izimpawu zesifo ziyahlukahluka kuye ngomuntu. Ngokuvamile izimpawu ukutheleleka zokuphefumula ebonwe zonke. Ngesikhathi esifanayo kungaba inamithiselwe umphimbo ezinzima obukhulu njengoba angina, migraine, noma elifana obuhambisana umkhuhlane. Okungenzeka iziyaluyalu dyspeptic: uhudo olubi isicanucanu nokuhlanza.
ukukhubazeka Flaccid imilenze ubulokhu izinsuku ezinhlanu. Ezinye izingane ebulala ngesivinini sombani - emahoreni ambalwa. Izingane ezinjalo ziye kakhulu ziyancipha imisipha ithoni, ikhaliphe umsipha kuyagcinwa. Imisipha yoma ngokushesha kakhulu: ingane ayikwazi ukuhamba, ukhubazeka. Ukufa uphela amacala lapho igciwane kuthinta le oblongata medulla, okuyinto inhliziyo izikhungo ukulawula futhi umgudu wokuphefumula. Isikhathi bayashintshana ekufukameleni ihlala izinsuku eziyisikhombisa kuya emasontweni amabili. Uvendle kuyinto izinhlobo eziningana: umgogodla, encephalitis, bulbar, Pontine, exubile, futhi ukungabi khona ukukhubazeka - visceral, meningitis asymptomatic.
Ingabe uvendle wadluliselwa amaconsi sisemoyeni? Impela kufanele abahloniphe. Ngakho ngesikhathi esigabeni sokuqala umuntu isifo ngaphandle zonke izici eziphawulwe ngenhla okunzima ukugodola evilaphayo futhi ekhathele. Yena ekhononda zokuqwasha, ukuquleka, ongalawuleki ukudikiza kwemisipha, ubuhlungu umgogodla, imilenze nezingalo. Uma yokugoma iye yenziwa, lesi sifo ngeke ukuya esigabeni esilandelayo, osuvele eyaziwa ngokuthi kofé uhlangothi. Nanguya ezikhohlisayo. Kid owayebonakala alulame. Yena lehla izinga lokushisa, umsebenzi luyanda. Kodwa ngemva kwezinsuku ezimbalwa kukhona ukukhubazeka. Ngokuvamile kuthinta imilenze, kodwa nabo bangase bahlupheke imisipha entanyeni, esifubeni, emzimbeni deltas, ngisho amalaka, nasopharynx, nezilimi ubuso. Ngemva kwamasonto amabili kufika esiyingozi esigabeni sesithathu - dislocations quin, yoma.
Isikhathi yokutakula kuthatha izinyanga eziyisithupha. Man uthola kancane kangcono, kodwa usabambelela imikhawulo ukunyakaza, ukuqina amalunga omzimba, ukwehla lesichubekako kwemisipha ivolumu. Khona-ke baqala ukubonisa imiphumela asalile - inkathi eziphikelelayo ukukhubazeka flaccid, contractures, deformity umgogodla futhi kokunciphisa nasemilenzeni.
Kuyathathelena Ingabe Uvendle idluliselwa kwengqondo sibheke nendlela lokhu ukutheleleka kumele bazi kokubili abadala kanye nezingane. Ngenxa yale njongo kubalulekile ukuthuthukisa izinhlelo zokufundisa umphakathi ezikoleni. On izifundo ezikhethekile izingane zingafunda konke mayelana nemvelo ukutheleleka kanye nezimpawu zayo ezivamile, ngesikhathi ukuthola ingozi futhi nenze. Phela, khona esolwa pathogen emzimbeni, kufanele ngokushesha aye esibhedlela ukuze usizo kumuntu ofanelekayo. Ukuze uqinisekise uphethwe, odokotela uyosingatha wokubhoboza lumbar - wokubhoboza ezonini lumbar ukufunda uketshezi emgogodleni.
Isiguli kuzothatha ukuhlolwa futhi uyithumele lab, lapho ukwenza uphethwe virological futhi serological. serum abhanqiwe uzobe ihlaziye ngokuningiliziwe: basuke ngokuvamile enziwa nge esingaba amasonto amathathu. Ngaphezu kwalokho, uvendle banalesi usizo okuthiwa umbala amasampula: iseli isiko igciwane izoshintsha umbala walo ngaphansi kwethonya ebonisa ekhethekile. Umphumela empeleni iyokwaziwa ngisho ezinsukwini ezimbili.
Khumbula ukuthi akekho ukwelashwa okuphumelelayo akusho. Eqinisweni, ngeke belashwa uvendle. Ngokusebenzisa ababedlula sifo kwasekuqaleni? Njengoba sekushiwo, lokhu emoyeni uyadedela indlela. Ngaphezu kwalokho, isiguli Ibhekwa ukuba isikhathi esithile esithathelwanayo. Ukuze bavikele abanye umthombo igciwane, umuntu ngokushesha esibhedlela ngoba izifo ezithathelwanayo - ebhokisini elikhethekile ukushisa namakhaza. Lapha kuzohlala izinsuku ezingu-40, futhi phakathi naleso sikhathi ngabe elashwe lingaze okuhloswe ngazo ukunciphisa izimpawu ezinkulu zesifo futhi ukuqinisa amasosha omzimba.
Isiguli uzothola ama-amino acid, amavithamini kanye ye-gamma globulin - iprotheni ekhona oketshezini olungenambala lwegazi. Uma hit uhlelo lokuphefumula, ingane ixhunywe kudivayisi, esiqhutshwa womoya-mpilo. Umbhede ukuphumula kuyadingeka okungenani amaviki amathathu. Kudingeka ukunakekela okukhethekile okudinga nemilenze abathintekayo nomgogodla. Isiguli amanga kumatilasi kanzima ukuma ezithile: imilenze embondelene nge roller esimweni kancane bent, izinyawo - at engele kwesokudla kuya tibia. Kulokhu, ezandleni ziyasuswa kuse ecaleni futhi i-engela 90º goba ngesikhathi izindololwane.
Ngemva ukwelashwa emtholampilo noma abazali bakhe kufanele ukuxoxa nodokotela wakho ngokuningiliziwe. Ingxoxo ngeke zithinta hhayi kuphela imibuzo eyisisekelo eyayihlanganiswe kubo uvendle - kuyini nokuthi isifo idluliselwa - futhi nokuthi kuyinto iphuzu elibalulekile njengoba nokuvuselelwa. Cishe, ngesikhathi sokubuyiselwa udokotela uyoncoma ukushukuma kagesi, upharafini zokugeza, hydrotherapy kanye therapy massage. Isiguli kufanele ngathunyelwa esibhedlela, lapho uzothatha ekuphuculeni ekwelapheni udaka nesibabule nokugeza.
Ingane kumele ungenele amakilasi ukuze udokotela wezifo zamathambo, ngubani sizosiza ekulungiseni esitho sengozini contractures athuthukile. Ukuze kulesetayelekile kwamanyuroni conduction ekhethwe izidakamizwa ezifana "Neostigmine" noma "Neuromidin". Umsebenzi ngempumelelo nokwelapha: it nje kuphela kuthuthukisa motor umsebenzi, kodwa futhi kuba nomphumela tonic. Isethi umzimba yethulwa kuleli ezahlukene zokwelapha kanye kuphela kudlule esigabeni acute lesi sifo.
Izinsolo ezithi uvendle ngofuzo, unephutha. Kungaba pick up kuphela indlela yokuxhumana: ezibhekwa esithathelwanayo engenhla zokuphefumula ipheshana nokuzihlukanisa indle. Ngaphezu kwalokho, Amagciwane angena emzimbeni ngokudla enobuthi futhi amanzi, ngezandla ezingcolile, amathoyizi ezingcolile. Futhi baphathe fly.
Ukuze ugweme omunye isisulu uvendle, umuntu kudingeka azi ukuthi ukuvimbela kunokwenzeka ukusilaphazeka. Okokuqala, kubalulekile ukuba athobele ukudla inhlanzeko. Zonke izithelo nemifino kufanele wageza ngaphambi kokusetshenziswa, amanzi kungaba kuphela niphuza distilled noma abilisiwe. Okwesibili, kubalulekile futhi siqu kwenhlanzeko: ukugeza izandla nokugeza njalo izingubo amashidi. Okwesithathu, kubalulekile ukuba silondoloze ukuhlanzeka ekhaya. Sikhuluma angabiki egumbini futhi njalo yokuhlanza ezimanzi. Kepha isenzo odokotela, kumele disinfected emthonjeni lesi sifo futhi qiniseka ukuhlukanisa abantu abagulayo nalabo abanokuhlangenwe nabo.
Okunye izinyathelo zokuvimbela
Umbuzo noma ngabe uvendle lidlule, akufanele kwenzeke manje. Yena ngenkuthalo hhayi kuphela "luhamba" kusukela komunye umuntu, kodwa futhi uchume, ungenisile imvelo yangaphandle. Ukuvimbela ukutheleleka - ngokugoma. Ukugoma iyona ndlela izingane oneminyaka engu-4, 5 no-6 izinyanga. Revaccination ngokuvamile eyenziwa eminyakeni eyodwa nengxenye, futhi lapho ingane iphendula 3, 6 no-14 iminyaka. seziguli ezisencane banikwa amathonsi: basuke iqondiswa emlonyeni kuya lymphoid. Lo mjovo okuthiwa attenuated wokugoma.
Phakathi zesikole popularize ujove esicutshini. Ngo isisekelo yabo - wokugoma equkethe wabulala uvendle igciwane. phansi kwesikhumba Iphathwe: izingane ezincane - endaweni izindwani, esiphezulu - ehlombe. Kid ukuthi Ngadubuleka, uthwala okuthiwa uvendle zigonywe. Kubaluleke ephephile emzimbeni. Ngaphezu kwalokho, ku-osekelwe kuyo amasosha omzimba kwakhiwa: umzimba ukhiqiza amasosha edingekayo igciwane eyingozi futhi ezingelapheki.
Amaqiniso ethakazelisayo yokugoma
Kunezindlela eziningi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ngokuphathelene nalesi sihloko. Ngokwesibonelo, abazali bavame abanesifiso umbuzo: idluliswe uvendle emva yokugoma noma cha? Ngokusho odokotela, igciwane langena umzimba ezivamile ingane kuwo, akuyona eyingozi kuye. Kepha uzama "ifohle" iphethini zokuzivikela iqala ukuziphindaphinda ngokuguquka kakhulu. Uma endaweni eziphilayo ezimbalwa zigonywe, wagcina iyaguquguquka futhi kungaba kuphela ukusongela umuntu. izingane abathandwayo, kodwa zigonywe isikhashana sengathi "akhipha" uvendle. Nokho, igciwane lesandulela ngculazi kubo akukwazi ukuba nomntwana ophile kahle. Nokho, uma eziningi encane kuwo iyagula HIV, kubalulekile ukwehlukanisa ngokushesha.
Izingane itheleleke nge-polio, ayikwazi zigonywe. Imijovo yokugoma nazo contraindicated kubantu abane-HIV, kulabo isikhathi eside uphuza imithi noma iguliswa imithi. Umgomo ayinayo imiphumela eseceleni, odokotela bathi. Inkathazo kuphela kungenzeka imfiva, kodwa lokhu akufanele kusenze ukukhathazeka - umzimba uqala ukukhiqiza amasosha omzimba oyifunayo kuso.
Lokho kuphakamisa ukuthuthukiswa zesifo?
Kunezici ukuthi kakhulu ona umzimba. Ngakho, zingenza kube umuntu sengozini, "edonsa" ukuze uvendle yakhe ill-fated. Njengoba ngocansi igciwane ukuthi kakade. Manje ake sicabangele izimo ukuthi mahle zizalela emhlabathini yokuba amagciwane:
Ukungabikho ephelele ngomgomo noma Yiqiniso akuphelele yokugoma.
Vala ukuxhumana nomuntu ogulayo.
Ukwamukelwa nemithi, ikakhulukazi ngesimo imijovo.
Ill nge-polio engozini wonke umuntu. ERussia, lapho nakho kuyanda ingozi yokubamba igciwane ngokuqondene abasuka Tajikistan abantu bomdabu, abavamise abathwali igciwane. Ngubani emngceleni izivakashi kusukela kuleli zwe is kuwo, kanye ukukwazisa lokho kudingeka kudlule saziso kabusha ngokugoma. Ngaphezu kwalokho, angabanjwa kakhulu kwaqinisa kokuqondisa imithetho aphansi sanitary.
Indlela uvikele izingane zakho?
Ukuze uvikele izingane, kubalulekile kuqala kuzo zonke ukwazi ukuthi uvendle ngobulili. Ezinganeni, ukutheleleka kwenzeka ngokushesha kakhulu, ikakhulukazi uma phakathi kwabo kukhona indawo ukutheleleka. Ngakho-ke, ukuze ugweme ukusabalala sifo izikhungo lapho ukufunda ukuhlala izingane, ukuzijayeza imisebenzi elandelayo:
Uma kukhona usongo igciwane kokugqashuka, izinyane entsha esikoleni, spa nezinye izinhlangano zezempilo awamukelekile.
abantu okungagunyaziwe akuvumelekile ukuvakashela izikhungo iyiphi zezingane.
izingane akhishiwe ukudlulisela komunye besiqhema.
Ezindaweni kuncike yokuhlanza ezimanzi njalo: okungenani ekuseni nakusihlwa. Amagumbi nazo kahle umoya noma umoya.
Izingane ziye zibopheke ukuba zigeze izandla njalo usuku lonke, ukubona ezinye imithetho inhlanzeko yomuntu siqu.
Ngaphezu kwalokho, udokotela wezingane wesifunda ubophekile nsuku zonke ukuze ahlole izingane. Lapho kuvela izimpawu zokuqala uvendle izingane ungeniswe ezithathelwanayo izifo esibhedlela.
Qaphela ukuba abazali
Babuye edingekayo isinyathelo abanekhono futhi asheshe. Okokuqala, abadala kufanele ulandele isimiso yokugoma: musa izingane zigonywe ngesikhathi ukwenza yonke imiyalo udokotela. Okwesibili, balindeleke ukuba bakwazi ukufundisa izingane ukuba zigeze izandla ngensipho ngemva kokusebenzisa indlu yangasese, uhlale ngaphandle, futhi ngaphambi kokudla. Okwesithathu, abazali kudingeka ukutshela izindlalifa, imuphi umonakalo izithelo ezingahlanjiwe nemifino, amanzi kampompi. Sinenkosi njalo ukuhlanza indlu kanye pholisa ke.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi amaqiniso amaningi athakazelisayo mayelana ne-polio (ukuthi luyini lolo daba futhi sidlulile kanjani). Ungakhohlwa futhi ukuthi umuthi wokugoma ongama kunezinzuzo eziningi uma iqhathaniswa nayo lapho sivela ngomlomo. izinzuzo zalo: akunika eziyikhulu amaphesenti amasosha omzimba, akakubangeli iziyaluyalu emathunjini bese nezinye izinkinga. Uma ingane lehla izinyanga ezimbili "obusuka" igciwane, okungabangela ingozi kwabanye noma abantu unvaccinated abanokuhlangenwe uhlelo ababuthakathaka mzimba.
Innovative yomkhiqizo: ubuchwepheshe kanye ngezigaba
Processor I-notebook Intel Core i5-3317U: ibhalansi esiphelele ukusebenza kanye nokusebenza kwamandla
Indlela ukususa isandiso anti-ezinenhlamba? Step by step imiyalelo kanye nezincomo